Global Voices teny Malagasy » Mustangs ny any Amerika Avaratra, ny soavaly dia ao Livno , Bosnia Herzegovina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Febroary 2020 17:31 GMT 1	 · Mpanoratra Balkan Diskurs Nandika (fr) i Emilie Vandapuye, avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Mediam-bahoaka, Saripika, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara
Tany am-piandohana ity lahatsoratra nosoratan'i Sanela Tufekčić ity dia nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Balkan Diskurs  [angl], tetikasa iray natomboky ny ivontoerana fikarohana rehefa aorian'ny fifandonana  [angl] (PCRC).  Naverin'ny Global Voices navoaka etoana ny dika nasiam-panovàna, ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Eny am-pototry ny tendrombohitra Cincar , tsy lavitra ny tanànan'i Livno ao atsimo andrefan'i Bosnia Herzegovina, no toeram-ponenana ho anà soavaly dia miisa 400. Efa ho 50 taona mahery, nizatra ny toetany henjana izy ireo ary afa-bela tamin'ireo mpihaza sy ny bibidia mpiremby azy. Eo aminà kijàna midadasika be sy ala, mitambatra ho zavatra iray tokana an-tany mahatalanjona ao amin'ny faritr'i Eoropa ireo zava-mananaina ireo.
Tsy misy hafa amin'ireo mustangs  any amin'ny lemaka ao Amerika, ireto taranaka biby nompiana ireto dia nafaran'ireo Espaniôla mpanjanaka avy any Amerika Avaratra ary niverina amin'ny fiainana anivon'ny natiora. Raha ny marina ireo soavaly dia ao Livno dia soavaly mpihenjy . Ny hany karazana soavaly tena azo lazaina fa dia ary mbola misy amin'izao fotoana izao dia ny soavalin'i Przewalski  [fr], na ny soavaly dian'i Mongolia, karazana iray tsy fahita firy sy an-dalam-paharinganana, avy any amin'ireo lemaka ao Azia Afovoany.
Ny fotoam-pahavaratra no fotoana ahafahan'ny olona izay mamakivaky ny tendrombohitra Cincar mahita ireny soavaly ireny mandritra ny fifindràny toerana mitady sakafo. Tsy maintsy miampita ny arabe fampiasa ry zareo satria, ao anatinà faritra iray izay tsy misy farihy sy renirano, ao no hany misy toerana roa azony isotroana rano. Noforonina manokana mihitsy izy ireo ho an'ireto soavaly ireto, nataon'ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanana mpiaro tontolo iainana sy an-tendrombohitra ao Borova Glava  [hr], mba hanentsenana io tsy fahampiana io.
Amin'ny ankapobeny, tsy misy rano ny lempona fonenan'ireo  soavaly. Noho izany dia mitangorona eny amin'izay toerana misy rano azony aleha ry zareo, izay noforonina sy karakarain'ireo ekolojista mpikatroka. Sary an'i Sanela Tufekčić, nampiasàna lisansa CC BY 3.0.
Na izany aza anefa, tsy hoe ieren-doza ny fiampitàny io arabe fampiasa io. Tamin'ny Jolay 2015, nisy fiaran'ny kaominina nitondra ny ben'ny tanànan'i Knin, tanàna kroaty iray ery ampitan'ny sisintany, nahadona iray tamin'ireny soavaly dia ireny  [hr], ka nahatapaka ny tongony iray. Tena sarotra ho an'ny soavaly ny ho sitrana aorian'ny ratra tahaka izany, ka toy ny efa fanao mazàna amin'ny tranga tahaka ireny, voatery notsindronina ho faty ilay biby.
Tamin'ny 2013, nandany didim-pitondràna mandràra ny fihazàna ireny soavaly ireny ireo manampahefana ao  [bs] Livno. Fahazaran'ireo mpihaza ny mamono ireo soavaly mba hakàna hena, saingy hatramin'ny nampiharana io fepetra vaovao io, tsy nisy intsony asa fihazàna naharaisana tatitra. Etsy ankilan'izay, mbola marefo hatrany ireo soavaly manoloana ireo biby mpiremby azy, araka ny hita tamin'ireo fanafihana maromaro nozakain'ilay andiany noho ny nataon'ny amboadia.
Natsahatra vonjimaika tamin'ny Desambra 2017  [bs] ilay didim-pitondràna, rehefa nangataka tamin'ny Fitondrana ny ao amin'ny fiadidiana ny tanàna mba hamatsiana vola ny fiarovana ireo soavaly ireo. Noraisina io fanapahankevitra io taorian'ny fitomboan'ireo fangatahana onitra  [bs] nataon'ireo mpamily niharan-dozam-pifamoivoizana noho ny amin'ireo andiam-biby ireo. Vao mainka be kokoa ny mety hitrangan'ny loza rehefa ririnina, satria mandeha eny amin'ny arabe ireo soavaly mba hilelaka ny sira ampiasain'ireo mpiasan'ny làlana hanempoana ny ranomandry.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/27/147112/
 Balkan Diskurs: https://balkandiskurs.com/en/2020/01/31/in-the-foothills-livno/
 ivontoerana fikarohana rehefa aorian'ny fifandonana: http://www.p-crc.org/
 tendrombohitra Cincar: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cincar
 soavaly mpihenjy: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marronnage_(zoologie)
 soavalin'i Przewalski: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Przewalski#cite_note-:0-1
 Fikambanana mpiaro tontolo iainana sy an-tendrombohitra ao Borova Glava: https://www.facebook.com/BorovaGlava/
 y lempona fonenan'ireo: https://fr.wikipedia.org/wiki/Karst
 nahadona iray tamin'ireny soavaly dia ireny: http://tris.com.hr/2015/07/na-povratku-s-klauzure-hdz-a-u-vitezu-sluzbeni-vw-passat-grada-knina-ubio-konja-josipa-rimac-hvala-gospi-svi-smo-zivi-i-zdravi/
 manampahefana ao: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/livanjski-divlji-konji-i-zakonom-zasticeni
 Natsahatra vonjimaika tamin'ny Desambra 2017: http://www.livno.ba/images/Sluzbeni_glasnici/Sluzbeni_glasnici_2017/Glasnik_9_2017.pdf
 fitomboan'ireo fangatahana onitra: http://rs.n1info.com/Lifestyle/a416902/U-podnozju-planine-Cincar-zivi-vise-od-600-divljih-konja.html